पूर्वलडाकु के गर्दैछन् हेगमा ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
पूर्वलडाकु के गर्दैछन् हेगमा ?
प्रकाशित मिति १४ बैशाख २०७६, शनिबार ११:४० लेखक नेपाली जनता
बार्सिलोना । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका संयोजक लेनिन विष्ट एक महिनायता युरोपमा व्यस्त छन् । द्वन्द्वकालमा लडाकू बनाएका बालबालिकाहरुका बारेमा जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उनी युरोप आएका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको बालसैन्य प्रयोगबारे, अन्तर्राष्ट्रिय युद्व अपराध अदालत हेगमा समेत पुगेर छलफल गरेको विष्ट बताउँछन् ।
विष्टले एक साताअघि मात्रै बेल्जियम पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरर्गत बालबालिका तथा सशस्त्र हिंसामा परेकाहरूका लागि राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि भर्जिनिया गाम्बासँग भेटवार्ता गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।
लेनिनजी, तपाई युरोप आउने भन्ने धेरैपटक सुनियो, एकपटक त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सरकारले फिर्तासमेत गरायो । तर, यसपटक भने तपाई युरोप आइपुग्नु नै भयो । यहाँसम्मको यात्राबारे संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न
विगत ८/९ वर्ष अगाडिदेखि हामीले आफ्नो अधिकारका लागि नेपालमा धेरै प्रयास गर्‍यौं । छलफल गर्ने कोसिस गर्‍यौं तर नेपाल सरकार र सम्बन्धित पूर्वनेतृत्वहरुले यसमा ध्यान दिनुभएन । ध्यान नदिएपछि हामीले आफ्ना शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरु जारी राख्याैँ।
केही महिना अगाडि तपाईहरुले सुन्नु पनि भयो होला, मलाई थाइल्याण्डमा एउटा अनुभव सेयरिङका लागि बोलाइएको थियो । त्यतिखेर मेरो नाम ब्ल्याक लिष्टमा राखेर बाहिर जान बन्देज गराइयो । मैले यो आन्दोलन सुरु गरिरहँदा कहिले जेल हाल्ने, कहिले अपहरण गर्ने, कहिले कोठा तोडफोड गर्ने त कहिले बाहिर जान बन्देज भएपछि बाध्य भएर यो इस्युमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्नुपर्छ र अन्तरािष्ट्रय समुदायले पनि बोल्नुपर्छ भनेर यहाँसम्म आएँ ।
पहिले विदेश जान रोकतोक गरियो पनि भन्नुभयो अन्ततः कसको सहयोग वा निमन्त्रणामा नेदरल्याण्डस आइपुग्नुभयो त ?
यहाँ त म नेदरल्याण्ड सरकारकै सहयोगमा आएको हुँ । आउने क्रममा पनि मेरो नाम ब्ल्याकलिष्टमा नै राखिएको रहेछ । म बाहिर आएँ भने नेपालको बाल सेनाको विषय, युद्ध अपराधको विषयचाहिँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सेयरिङ गर्छु, अन्तराष्ट्रिय समुदायको ढोका ढक्ढकाउँछु भन्ने नेपाल सरकारले बुझेका कारण मलाई आउने क्रममा फेरि पनि रोकिएको थियो । ८/९ जना इमिग्रेसनका साथीहरु हुनुहन्थ्यो, ४५ मिनेट जति रोकेर उहाँहरुले कस–कसलाई फोन गर्नुभयो । मेरो सबै डकुमेन्ट कपी गर्नुभयो । तर, उहाँहरुले निर्णय लिन नसकेका कारण होला, अथवा रोक्न नमिल्ने कारण म आउन सफल भएँ । मेरो फ्लाइट राति २ बजेको थियो, त्यसैले पनि फोन गर्दा नेतृत्वको फोन उठेन होला वा के भयो, त्यसैले म आउन पाएँ होला जस्तो लाग्छ ।
तर, तपाई पनि कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ, कसैले तपाईलाई प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने आरोप सुनिन्छ नि ?
पहिलो कुरा त आरोप कस्तो मान्छेले लगाइरहेको छ भन्ने कुरा हो । अर्को कुरा, हामी अन्यायमा परेका छौं । न्याय माग्दाखेरि स्वाभाविक रुपमा राज्यपक्ष र सम्बन्धित सत्तापक्षले यस्ताखालका आरोप लाउने नै गर्छन् । अब शान्ति प्रक्रियामा गएर देशले के पायो त ? पीडितहरुले के पाए ? हामीले त सबै गुमाएका छौं ।
उनीहरुको मनोइच्छाले लडाउने, जनता मार्ने, बिचल्ली बनाउने, अनि ल अब हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौं, सबै कुरा भुल भनेर सम्भव हुन्छ र ? हुँदैन नि । कमसेकम पीडितसँग त सोध्नुपर्‍यो, के चाहन्छन्, उनीहरुको मागको सम्बोधन हुनुपर्‍यो ।
तर, राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छ । त्यहीँबाट नै न्याय खोज्नु उपयुक्त हुँदैन र ? तपाई त अन्तरराष्ट्रियकरण भन्दै विदेशमा आउनुभएको छ, यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?
सत्य निरुपण आयोग ढिलै गठन भए पनि द्वन्द्व पीडितहरुका लागि, समग्र राज्यका लागि राम्रो कुरा थियो । तर, कस्तो भयो भने देखाउनका लागि मात्र । अरुलाई मूर्ख बनाउनका लागि बनाइएको जस्तो भयो ।
सबै आफ्नै दलको भगवण्डाका मान्छेहरु नियुक्त गर्ने, त्यहाँका सदस्यहरु, अध्यक्षहरु, उहाँहरुले आफ्नो दलको नेतृत्वमा परेको उजुरीहरुको छानविन नगर्ने । एउटा राम्रो काम उजुरी संकलन गर्ने काम भयो, तर दलका नेतालाई बचाउने बाहेक अरु त केही भएन नि । न्यायालयमा हेर्नुहुन्छ भने दलको भागवण्डा छ, आयोगहरुमा हेर्नुहुन्छ भने दलको भागवण्डा छ । त्यहाँ त पीडितको कुरा सुन्ने कुरा आएन नि ।
त्यसोभए सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट न्याय पाउन सक्नुहुन्न ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या हेर्ने भनियो । तर, त्यहाँभित्र बाल सेना प्रयोग गरेको विषयलाई म्यान्डेटका रुपमा नै राख्नुभएन । किन राख्नुभएन भनेर विभिन्न कार्यक्रममा हामीले सोध्यौं, राख्दाखेरिचाहिँ नेपाल सरकारलाई अफ्ठ्यारो पर्ने, पूर्वविद्रोही नेतृत्वलाई अफ्ठ्यारो पर्ने भएकाले उहाँहरुले राख्नुभएन ।
न्यायलयमा त यो कुरा लिने कुरै भएन, नेपालमा सम्पूर्ण न्यायको ढोकाहरु बन्द भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा न्याय खोज्न आउनुपर्ने बाध्यता भयो ।
तपाई एक महिनादेखि नेदरल्याण्डमा हुनुहुन्छ, यसवीचमा अन्तरराष्ट्रिय युद्व अपराध अदालत हेगसम्म पुग्नुभयो । त्यहाँका अधिकारीहरुसँग के कस्तो विषयमा छलफल भएको छ ?
म यहाँ आएपछि विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुखहरुसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरर्गत बालबालिका तथा सशस्त्र हिंसामा परेकाहरूका लागि राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधिसँग एकहप्ता अगाडि बेल्जियममा भेट भयो । हेगअन्तर्गत विभिन्न वकिलहरुसँग मेरो आन्तरिक छलफल भएको छ । नेपालले रोम विधान स्वीकार गरेको छैन भन्ने आएको छ ।
अपराध त भएकै छ नि । राज्यपक्षले हजारांै बालबालिका मारेको छ, विद्रोहीले हजारौं बालबालिका प्रयोग गरेको छ । सबैले बालबालिकालाई निसाना बनाउने, दुरुपयोग गर्ने, युज एण्ड थ्रो गर्ने तर सम्बोधन नगर्ने भएपछाडि दुबै पक्षबाट अपराध भएको छ । अब यो रोम विधान स्वीकार त नेपाल सरकारले गर्दैन, त्यसो भए यसको विकल्प के छन् भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छु ।
नेपाल हेगको पक्ष राष्ट्र नभएकाले त्यहाँ मुद्दा दर्ता हुँदैन भन्नुभएको हो ?
यही छलफलमा छु । अपराध गरिसक्यो, भइसक्यो, अपराध भइसकेपछाडि कुनै न कुनै रुपमा न्यायका लागि सम्बोधन हुनुपर्छ । उहाँहरुसँग छलफल भइरहेको छ । ठ्याक्कै एकै दिनमा निर्णय भइहाल्ने होइन । यो ठूलो विषय हो । एउटा देशको मात्र कुरा भएन, अन्य देशहरुको पनि सर्मथनहरुका लागि भेटघाट गरिरहेको छु । जस्तै– यहाँ विभिन्न पार्लियामेन्टका मेम्बरहरु र मिनिष्टरहरु, सम्बन्धित संघसंस्थाका मान्छेहरुसँग भेट्दैछु । केही दिनमा जर्मन पार्लियामेन्ट मेम्बरहरुसँग, मिनिष्टरहरुसँग भेट हुँदैछ ।
यो विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । किनभने, हरेक देशमा युद्ध हुँदा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । हामीले बोलेनौं भने फेरि युद्ध हुँदा बालबालिकाको प्रयोग हुने सम्भावना छ । नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि युद्ध हुने सम्भावना प्रवल बढेर आएको छ, हाम्रै पूर्वसाथीहरु पनि अब त्यसमा दुरुपयोग हुने सम्भावना छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा के छलफल गर्नुभयो ?
मैले भेटघाटमा स्पष्ट रुपमा के भने भने अनमिनले बीच बाटोमै छाडेर गयो । सबै कुरा अनमिनको भेरिफिकेसनबाटै सुरु भएको हो, छाडेर गएपछि यसको जिम्मा युएनले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो विषयमा उहाँहरु गम्भीर हुनुहुन्छ, यसमा गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँहरुले सम्पूर्ण अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहोला भन्ने लागेको छ । एउटै भेटमा सबै समाधान नै हुन्छ भन्ने होइन । हामी अन्यायमा परेकालाई सम्बोधन गर्नु नै हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ ।
पहिले–पहिले त तपाई सरकार, तत्कालीन माओवादी नेतृत्व र सरोकारवाला पक्ष सबैले बाल सैन्य भर्तिबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले तपाई सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य गतिविधिलाई हेर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मात्र केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ नि ?
दुईवटा कुरा हो, एउटा जवाफदेही हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा हो, अर्को भविश्यमा यस्तो घटना नघटोस् भन्ने कुरा हो । यो व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा हैन । तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो पुरानो ७ बुँदे माग यथावत छ, जुन सरकार र सम्बन्धित पक्षले जिम्मेबारी लिउन् जवाफदेही हुन् भन्ने छ । हाम्रो छलफल पनि त्यसैमा केन्द्रित छ । तर, मान्छेहरु र केही मिडियाहरुले ‘कोट’ गर्दा पुष्पकमल दाहालको मात्र गरे होलान् । तर, सिधा–सिधा कुरा हिजोका सम्बन्धित पक्ष, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल केही नेताहरुका कारण देशमा हजाराै‌ँ मरे । यी सबै युद्धका दोषी हुन् ।
त्यसोभए यी सबैका विरुद्व मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्छ त ?
यिनीहरुविरुद्ध मुद्दा हुनुपर्छ भन्ने हो । यदि मिल्यो भने उहाँहरु सबैका विषयमा मुद्दा जान्छ । यो प्रचण्डको विरुद्धमा मात्र हैन, किनभने उनीहरु सबै युद्धका दोषी हुन्, उहाँहरुकै कारणले हजारांैको घरबार विल्लीबाठ भएको छ ।
हामीजस्ता मान्छे युद्धमा लाग्नुपर्ने अवस्था आयो । यो त राज्यको कारणले पनि लाग्नुपर्ने अवस्था आयो । राज्यले पनि धेरै बालबालिका मार्‍यो । यो विषयमा त कोही बोलेको छैन ।
तर, तपाईले भनेका यिनै नेताहरुले बेलैमा शान्ति प्रक्रिया नगरेको भए, मुलुकमा अझै युद्व चलिरहेको भए कति नेपालीको ज्यान जान्थ्यो होला ? युद्वका क्रममा त झन्डै १७ हजार नेपालीहरुको ज्यान गुमाइसकेका थिए नि ?
कसको कारणले युद्ध भयो र किन भयो भन्ने कुरा पुष्टि हुनुपर्‍यो नि । केही मान्छेको घमण्डले गर्दा आखिर युद्ध भएको भन्ने कुरा त पुष्टि भैइसक्यो । जनताले बुझिसकेका छन् भने हामी पीडितले त नबुझ्ने कुरै भएन ।
पहिल्यै ४० बुँदे माग बुझाउँदा शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेको भए युद्ध हुने नै थिएन । त्यहाँ पनि दोषी को–को छ भन्ने कुरा आउनुपर्‍यो ।
अर्को कुरा, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जवाफदेही नहुनुपर्ने हो त ? जवाफदेही त हुनुपर्‍यो । अब यस्तो घटना भविश्यमा घट्दैन त ? यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्‍यो नि । यस्ता घटनाहरु हामी भविश्यमा हुन दिँदैनौ भनेर प्रतिवद्धता आउनुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रिया गर्दैमा सबै कुरा सकियो त ? उहाँहरुको त केही क्षति भएको छैन नि । क्षति त नेपाली जनताको भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन ?
तपाईले अन्तरराष्ट्रिय युद्व अपराध अदालत हेगका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभयो, कानुनविदहरुसँग परामर्श लिनुभयो, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँग छलफल, भेटवार्ता गर्नुभयो । समग्र तपाईको युरोप भ्रमणबाट के उपलब्धि भएको ठान्नुहुन्छ ?
उपलब्धी त ठ्याक्कै अहिले नै यही नै हुन्छ भनेर भन्न कठिन छ । तर यी हाम्रा बिषयहरुमा अन्तराष्ट्रिय समूहले पनि चासोको साथ हेरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । संसारभरि जसले बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्दैछन्, उनीहरुले बेलैमा सोच्नुपर्छ । आशाहरु त धेरै छन् नि, पीडितहरुले जहिले पनि न्याय पाउन सक्छन् । द्वन्द्वका क्रममा यस्ता प्रकारका घटनाहरु नहुन् भनेर सचेत गराएका छांै ।
तपाई जर्मनी पनि जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यहाँ त्यस्तो खास भेटघाट तथा कार्यक्रम के छ ?
जर्मनी म छलफलकै लागि जानेछु, विश्व समुदाय जर्मनी, स्वीटजरल्याण्ड र अन्य देशको पार्लियामेन्ट मेम्बरसँग छलफल गर्न जानेछु । उहाँहरुले मिटिङ मिलाउनुभएको छ । युनिभर्सिटीहरुले बोलाउनुहुन्छ, यहाँ फेरि सेन्जन भिसा भएको कारणले त्यस्तो निमन्त्रणा चाहिँने हुँदैन रहेछ । टाइम मिलाउनु भएको छ, मैले गएर आफ्ना कुराहरु र उहाँहरुले गर्न सक्ने सहयोगको विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नेछु ।
अन्त्यमा लेनिनजी, तपाई युरोपमा अझै कति समय बस्नुहुन्छ ? यतै बस्ने योजना त बनाउनुभएको छैन ?
हैन, म त यहाँ किन बस्ने ? म त यहाँ आफ्नो न्यायको छलफलका लागि आएको हुँ । एक/दुई महिनापछि नेपाल नै फर्किन्छु । धेरै नेपाली दाजुभाइहरु पीडित हुनुहुन्छ । सबै आवाज उठाउने जति विदेश आएर बस्यो भने नेपाल कसले बनाउँछ ? नेपाल पनि बनाउनुपर्‍यो नि ।
युरोप र अमेरिकाले नेपालीहरुका लागि सपना जस्तो बनाइदिएको छ, वास्तवमा त्यो हैन नि, त्यो कुरा हामीले गएर युवालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो नेतृत्वको गलत निर्णयका कारणले मुलुकचाहिँ सधंै तल–तल गइरहेको छ र देश भष्ट्राचारबाट जर्जर भइरहेको छ भन्ने कुराकोे छलफल गर्नका लागि म त नेपालमै हुन्छु । युवाहरुसँग छलफल गर्छु । असल नेतृत्व पायौं भने, असल भिजनरी नेता पायांै भने युरोप अमेरिका भनेको हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रकृतिले हामीलाई सबै कुरा दिएको छ । केही कृत्रिम कुराको विकास गर्‍यौं भने विकास सम्भव छ । त्यसका लागि पुरानो नेतृत्वहरु र पीडकहरुबाट चलाएको सत्ताबाट सम्भव नहुँदोरहेछ भन्ने कुराको छलफलका लागि भए पनि म नेपालमै हुनेछु । अनलाइन खवरबाट साभार गरेका हाैं ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च २८ प्रतिशतले कमी
काठमाडौं । सरकारले मितव्ययिता अपनाउने रणनीतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च २८ प्रतिशत कमी आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी…
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा निस्किएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तत्कालका लागि टरेको छ । अब प्रचण्ड…
प्रधानमन्त्रीमाथि मुख्य सचिव फेर्न दबाब, रेग्मीलाई मुख्यसचिवमा कायम राखिराख्दा सरकारको सुशासनको लक्ष्य पूरा नहुने !
काठमाडौं । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारद्वारा नियुक्त भएका लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिवमा कायम राखिराख्दा सरकारको सुशासनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री…
न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन बारको आग्रह, ‘प्रकृया मिचेर डा. केसीले प्रधानन्यायाधिसलाई लान्छना लगाए’ !
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियशनले प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई अनसान फिर्ता लिन…
काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका-८ सोल्टी बजारस्थित ईन्द्रजात्रा मेलाबाट आइतबार विहान प्रहरीले नक्कली नोटसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ…
‘खानेपानी सहज वितरणको लागि भिडियो बैठक’ 367 views
अब एसईई विद्यार्थीका लागि नयाँ सुविधा 40 views
काठमाडौं क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको भिडियो सर्वाजनिक, काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाएन ? 14 views